Fanapahankevitra Vao Haingana Noraisin’i Trump Momba ny Politika Ivelany, Mampanahy an’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2017 2:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, عربي, Português, Deutsch, polski, Ελληνικά, Français
Ny Maoske Al-Aqsa , sary avy amin'i Andrew Shiva CC BY-SA 4.0
Nambaran'i Donald Trump, filohan'i Etazonia, fa manomboka izao Etazonia dia manaiky ny maha-renivohitry ny fanjakan'i Israely an'i Jerosalema. Niteraka fanehoankevitra avy amin'ireo firenena maro velom-panahiana amin'izay ho vokany io fanambaràna miteraka resabe io, ary tsy tara tamin'izany ny tanibe afrikàna. Naneho ny heviny tamin'ny alàlan'ny fanambaràna iray ny Firaisambe Afrikàna, manontany ny momba izay mahamety ilay fanapahankevitr'i Washington no sady manamafy ny firaisankinan'ireo firenena afrikàna amin'ny vahoaka Palestiniàna. Toy izay koa, i Ejipta sy Senegaly dia samy niantso ny filankevi-pilaminana ao amin'ny Firenena Mikambana hilaza izay ahiahin'izy ireo momba ny ho fiantraikan'io fanapahankevitra io.
Nisy ireo hetsika fanehoana firaisankina amin'i Palestina nokarakaraina tao Ejipta, Tonizia ary Maraoka.
Karim Ben Said, mpanoratra ao amin'ny gazety mpiseho isanandro La Presse ao Tunis, nitatitra hoe marobe ireo fihetsiketsehana nitranga nanerana an'i Tonizia :
Manome fotoana iray fanararaotra ho an'ny vahoaka arabo sy miozolmana i Trump ankehitriny mba handinihany tena momba ny loza ateraky ny fanapahakevitra tahaka izao. Amin'ireo fihetsiny ireo, ankolaka no ankasitrahan'ny filohan'i Etazonia ny fandroahana ireo Palestiniàna tsy ho eo amin'ny taniny, ary mazava loatra fa hamoha ny hatezeran'ny vahoaka arabo. Vavolombelon'izany ilay hetsika tselatra, omaly, nataon'ireo tanora mpianatry ny lisea sy ny anjerimanontolo tao amin'ilay lalambe migodàna ao Tunis, ny arabe Habib-Bourguiba..Nisy ihany koa ireo fihetsiketsehana manohitra ilay fanapahankevitr'i Donald Trump sy ny Fitantanany, nitranga tany amin'ireo governorà sasany ao Tonizia. Tany amin'ny tanàna hafa, ireo tanora no tena nihetsika raha ampitahaina amin'ny olondehibe. Nitranga ihany koa ny toy izany tao Sidi Bouzid, tao Tozeur, tao Kébili, tao Gafsa ary tany amin'ireo faritra hafa tao Tonizia. Tany anatin'ireny fihetsiketsehana rehetra ireny, vahiny nomena voninahitra manokana ny sainam-pirenena palestiniàna ary nasandratra avo araka izay tratry ny tànana.
Tao Maoritania, Dia Cheikh Tidiane, talen'ny famoahana ny gazety mpiseho isanandro Rénovateur, sahirana nanakatra izay hevitr'io fanapahankevitra io :
Izany no fitondrantena tsy dia diplaomatika loatra ataonà lehilahy iray izay ny vinany sy ny politikany dia disoin'ny tsy fahafantarana tanteraka ny tontolo ivelany. Tsy fahalalàna izay manazava ny zavamisy hoe tsotsofiny ny afon'ny fifandirana fahagola nisy tao Afovoany-Atsinanana
Ao Afrika atsimon'i Sahara ihany koa, manjaka ny tsy fahatakàrana. Betsaka ireo mpanaramaso no manontany tena amin'izay mampitombina na tsia io fanapahankevitra io, sy izay ho fiantraikany amin'ny fahamarinan-toerana ao Afovoany-Atsinanana. Hugues Richard Sama, mpamoaka lahatsoratry ny gazety borkinabe L'Observateur manontany tena momba izay làlan-tsaina tao ambadik'io fanambaràna io:
Amin'ny anaran'ny fandriampahalemana, mila miala i Trump alohan'ny hanaovany fandravàna mahatsiravina. Misy toy ny endrika hadalàna sy tsy maha-tomponandraikitra ao amin'ity amerikàna lehiben'ny mpanatanteraka ity izay mampanontany tena indraindray raha tena voafehiny tokoa ireo olana iraisampirenena. Na atao aza hoe nanohana hatrany ny israeliana mpiaradia aminy i Etazonia, dia nataony tamim-pahamalinana sy fahaizana mandinika ny tena politika izany. Ary dia indro ankehitriny ity antidahy anatin'ny fahafitopolo taonany ity, miaraka amin'ny volo voaloko tany aminà planeta tsy hay hoe aiza, nidina tamin'ny elonaina avy any amin'ny Tilkambo Trump-ny izay tsy tokony nidinany velively, fa tonga handrava ny fady sy hanapaka ny fifanarahana izay, na dia marefo aza, dia farafaharatsiny mendrika ny hisy.
Iray tamin'ireo firenena naneho hevitra tamin'ny fomba ofisialy momba ilay fanambaràn'i Trump i Senegaly. Ara-tantara dia niray hina hatrany tamin'ny tolon'ny Palestniàna i Senegaly. Araka izany, ny fikambanana Firaisankina Senegaly-Palestina dia misy efa hatramin'ny ampolotaona maro mba hanamafisan'izy ireo ny fisafidianany hisian'ny vahaolana eo amin'ireo Fanjakàna roa ao amin'ilay faritra. Mpandrindra io fikambanana io i Madieye Mbodj ary mamaleloka mafy ilay fanapahankevitry ny filoha Trump.
Raha avelantsika hanitsakitsaka fifanarahana iraisampirenena i Donald Trump, fifanarahana nanameloka tamin'ny fomba mahitsy ny fanjanahana ataon'ny israeliàna, tafiditra amin'izany ny fibodoana an'i Jerosalema, dia heverinay fa fanitsakitsahana tanteraka ny zon'ireo vahoaka palestiniàna izany, ary indrindra indrindra, fanosehana ho amin'ny ady.
Farany, ao Kenya, Dr Monda, profesora mampianatra siansa politika, dia manandrana manombana ireo antony sy ireo fiantraikan'io safidy io :
Ity fanapahankevitra ity dia tsy manao afa-tsy ny lalaon'ireo mpikambana ao anatin'ny fiaraha-mitantan'ny mpifikitra amin'ny nentindrazana izay tarihan'ny Likoud ao Israely. Tsy isalasalàna fa arakaraky ny hanatonan'ny 2020 fotoam-pifidianana izay ho filoha, katsahan'Ing. Trump ny hanamafisana ny fototra ara-pifidianany sy hanitarana eny anivon'ireo vondrom-piarahamonina jiosy amerikana ao Amerika . Kanefa, mety hifototra aminy ihany io fihetsiny io satria manana fironana miova hevitra tampoka izany izy momba ireo raharaha mafampàna. Mametraka ireo firenena mpiaradia amin'ny amerikana ho aminà toerana saropady ihany koa, toa an'i Kenya. Mba tiako raha i Trump no mahatsiaro ireo fisaintsainana nataonà filoha amerikàna iray hafa momba ny politika ivelany, i Thomas Jefferson, izay fehezina amin'ity tanisa ity: “Adidintsika no sady koa tombontsoa ho antsika ary tokony ho amporisihana miaraka amin'ny firenena rehetra ny fanahin'ny fahamarinana sy ny marimaritra iraisana atao am-pirahalahiana”.